Fiainana feno? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Fiainana tanteraka?
Nasehon’i Jesosy mazava tsara fa tonga Izy mba hanana fiainana feno izay manaiky Azy. Hoy izy: “Izaho avy mba hananany fiainana be dia be.” (Jaona 10,10). Manontany anao aho hoe: "Inona no atao hoe fiainana feno?" Rehefa fantatsika ny atao hoe fiainana be dia be vao afaka manamarina raha tena marina ny fampanantenan’i Jesosy Kristy. Raha dinihina amin'ny lafiny ara-batana fotsiny io fanontaniana io, dia tsotra ny valiny ary azo inoana fa hitovy foana izy io, na inona na inona toerana misy ny fiainana na kolontsaina. Ny fahasalamana tsara, ny fifamatoran'ny fianakaviana matanjaka, ny namana tsara, ny fidiram-bola ampy, ny asa mahaliana, ny fanamby ary ny fahombiazana, ny fankasitrahana avy amin'ny hafa, ny zo hiteny, ny fahasamihafan'ny sakafo, ny sakafo mahasalama, ny fialan-tsasatra ampy na ny fotoana fialan-tsasatra.
Raha nanova ny fomba fijerintsika isika ary nijery ny fiainana amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly dia ho hafa be ilay lisitra. Miverina amin'ny mpamorona ny fiainana ary na dia ny olona tamin'ny voalohany aza nandà ny hiaina akaiky aminy, dia tia ny olona izy ary manana drafitra hitarika azy ireo hiverina any amin'ilay Rainy any an-danitra. Ity drafitra nampanantenaina momba ny famonjena avy amin'Andriamanitra ity dia aseho amintsika amin'ny tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika olombelona. Ny asan'i Jesosy Kristy zanany lahy dia niverina tamin'ny alalany. Tafiditra ao koa ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay izay mameno ny zava-drehetra, izay tarihintsika miaraka amin'ny fifandraisan-janaka be fitiavana.
Ny laharam-pahamehana izay mamaritra ny fiainantsika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana, ary ny fahasamihafantsika amin'ny fiainana mahavita dia tena hafa mihitsy.
Eo an-tampon'ny lisitray dia mety ho fifandraisana mihavana amin'Andriamanitra, ary koa ny fanantenana fiainana mandrakizay, ny famelana ny helontsika, ny fahadiovan'ny fieritreretantsika, ny fahatsiarovan-tsaina mazava, ny fandraisana anjara amin'ny fikasan'Andriamanitra eto ary ankehitriny, ny taratry ny Andriamanitra Natiora amin'ny tsy fahalavorariana an'ity tontolo ity, ary koa ny mikasika ny olombelona mpiara-belona amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny lafiny ara-panahy amin'ny fiainana tanteraka dia mandresy amin'ny faniriana ny fanatanterahana ara-batana sy ara-nofo.
Hoy i Jesosy: “Na iza na iza te hiaro ny ainy dia hahavery izany; ary na zovy na zovy no hahafoy ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hiaro izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao sy manimba ny fanahiny? (Markus 8,35-36). Noho izany dia azonao atao ny mamandrika ny zavatra rehetra ao amin'ny lisitra voalohany ho anao ary mbola very ny fiainana mandrakizay - ho very maina ny fiainana. Raha toa kosa ianao ka afaka mitaky ireo zavatra voatanisa ao amin'ny lisitra faharoa, dia hosatrohina amin'ny fahombiazana be dia be amin'ny heviny manokana ny fiainanao, na dia tsy hitanao fa voatahy amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny lisitra aza ianao. lisitra voalohany.
Fantatsika ao amin’ny Testamenta Taloha fa nifandray akaiky tamin’ny fokon’i Israely Andriamanitra. Nohamafisiny tamin’ny fifanekena nataony tamin’izy ireo teo amin’ny Tendrombohitra Sinay izany. Tafiditra ao anatin’izany ny adidy ny hankatò ny didiny sy ny fitahiany raha sendra mankatò na ozona izay ho azony vokatry ny tsy fankatoavana (5. Mo 28; 3. Mon 26). Ny fitahiana nampanantenaina taorian’ny fitandremana ny fanekempihavanana dia tena ara-nofo – biby fiompy salama, vokatra tsara, fandresena ny fahavalon’ny fanjakana, na orana amin’ny fotoana iray ao anatin’ny taona.
Fa Jesosy dia tonga hanao fanekena vaovao mifototra amin’ny fahafatesany ho sorona teo amin’ny hazo fijaliana. Izany dia mifandray amin’ny fampanantenana izay nihoatra lavitra noho ny fitahiana ara-batana dia ny “fahasalamana sy fanambinana” nampanantenain’ny fanekena taloha natao teo amin’ny Tendrombohitra Sinay. Ny Fanekena Vaovao dia nitana “fampanantenana tsara kokoa” (Hebreo 8,6) vonona, izay ahitana ny fanomezana ny fiainana mandrakizay, ny famelan-keloka, ny fanomezana ny Fanahy Masina miasa ao anatintsika, ny fifandraisana akaiky amin’ny ray sy ny zanaka amin’Andriamanitra sy ny maro hafa. Ireo fampanantenana ireo dia mitahiry fitahiana mandrakizay ho antsika – tsy ho an’izao fiainana izao ihany, fa ho an’ny fotoana rehetra.
"Ny fiainana tanteraka" izay natolotr'i Jesosy anao dia lehibe sy lalina kokoa noho ny fiainana tsara eto sy amin'izao fotoana izao. Irintsika rehetra ny miaina fiainana tsara eto amin'ity tontolo ity - tsy hisy olona te-haniry fanaintainana tsara amin'ny fahasalamana! Raha jerena avy amin'ny fomba fijery hafa ary nojerena avy lavitra dia lasa mazava fa ny fiainanao dia tsy misy dikany sy tanjona ao amin'ny harena ara-panahy ihany. Mbola mahatoky amin'ny teniny i Jesosy. Mampanantena anao “fiainana tena feno” izy - ary omeny anao izao.